Guddiga Doorashada JSL, Xisbiyada & Dowladda Oo Ka Shiray Buuxinta Shuruudaha Musharrixiinta Laga Rabo | Aftahan News
Guddiga Doorashada JSL, Xisbiyada & Dowladda Oo Ka Shiray Buuxinta Shuruudaha Musharrixiinta Laga Rabo
Hargeysa (Aftahannews)- Guddiga doorashooyinka Qaranka Somaliland, Masuuliin ka kala socday saddexda Xisbi, ayaa maanta yeeshay kulan lagaga wadahadlay dhaqangelinta Shuruudaha Xeerka doorashooyinka iyo diiwaangelintu ku waajibiyey Musharrixiinta doorashada golayaasha deegaanka iyo Wakiillada isu taagaya.
Sidaa waxa lagu sheegay qoraal caawa ka soo baxay Guddiga doorashooyinka Somaliland, waxaanu u dhignaa sidatan:- “Gudidda doorashooyinka Somaliland, ayaa maanta kulan la yeeshay Saddexda Xisbi Qaran, Wasaarada Waxbrashada, Guddida Tacliinta Sare, Wasaaradda Maaliyada, Wasaradda Caafimaadka, Xeer-Ilaalinta Qaranka & Hay’adda Shaqaalaha Dawladda.
Kulankan ayaa lagaga hadlayay sidii Xulista Musharixiinta Doorashooyinka Deegaanka iyo Wakiilada loo dardar-gelin lahaa iyo sidii loo hubin lahaa in dhammaan Murashixiintu ay buuxiyeen Shuruudaha uu qeexay isla markaana uu waajibiyay Xeerka Guud ee Doorashooyinka & Diiwaangelinta Codbixiyayaasha 91/2020 iyo Dastuurka Somaliland.
Waxaana si qoto-dheer lays kula eegay sidii Xisbiyada, Hay’adaha kala duwan ee Dawladda iyo Koomiishanka Doorashooyinka u hubin lahayeen fulinta Xeer Lr. 91/2020 iyo dhaqan-gelinta Qoddobada Xeerka sida Shuruudaha ku xidhan Murashixiinta isku taagi doona Doorashooyinka inagu soo foolka leh.” Sidaa ayaa lagu yidhi qoraalka Guddiga doorashooyinka Qaranka Somaliland ka soo baxay.